တရားသက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်း | Rieter Professional Credit Bureau
ကိရိယာတစ်ခုသည်ပြဌာန်းထားသောသက်သေသာဓကရှိသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်အခြေခံအဖြစ်အသုံးမပြုမီ၎င်းကိုပြဌာန်းထားသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏အဓိကအချက်သို့ဖတ်ရမည်။ သက်သေများသည်သက်သေပြသည့်နည်းဥပဒေများဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏သက်သေခံချက်မှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။
သက်သေသာဓကသက်သေနဲ့သက်သေပြသူတွေကခရက်ဒစ်ကဒ် ၀ န်ထမ်းတွေဟာလက်ကိုင်ကင်မရာတွေ၊ အိမ်သာစက္ကူတွေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာအရည်တွေသုံးပြီးကွန်ဒုံးတွေကိုင်ဆောင်ထားတာတွေအပါအ ၀ င်သက်သေအထောက်အထားတွေပါ။ ရေချိုးခန်းထဲမှာလဲကျသွားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆံပင်ကသက်သေပဲ။ မီးခိုးမြူများနှင့်ပြည့်နေသောစားပွဲတင်မီးအိမ်သည်လည်းအထောက်အထားဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လမ်းလျှောက်နေသောကင်မရာဗီဒီယိုသည်သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ the အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားချိန်တွင်ဝန်ထမ်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်အားလုံးသည်သက်သေဖြစ်သည်။
အထောက်အထားစွမ်းရည်ဖြေ - သက်သေသာဓကကတော့ Baoshan Baohai ပါ။ တရားစွဲဆိုမှုနဲ့အင်အားနည်းမှုနဲ့နည်းပညာကိုအခြေခံပြီးသက်သေအထောက်အထားအားလုံးကိုကန့်သတ်ချက်မရှိစစ်ဆေးလို့မဖြစ်နိုင်ပါ၊ အခင်းဖြစ်ပွားရာရှိပိုးဟပ်အသေးစားများသို့မဟုတ်ပုရွက်ဆိတ်တွေကိုမစုံစမ်းနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ... သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုတည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှာဖွေရေးမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍“ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း” သည်တရားမ ၀ င်ပါက၊ သို့မဟုတ်သက်သေအထောက်အထားများကိုတရားမ ၀ င်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှရယူလျှင်ပင်သက်သေအထောက်အထားစွမ်းရည်ကိုဖြတ်ကျော်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ တရား ၀ င်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိသေးသောအထောက်အထားများ၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ဇာစ်မြစ်အထောက်အထားများကဲ့သို့သောလုပ်ကြံထားသောသက်သေအထောက်အထားများ၊ တရားသူကြီးအတွက်အဓိကအချက်များအဖြစ်အသုံးပြုရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်ခရက်ဒစ်ရှာဖွေသည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ရလဒ်လည်းဖြစ်သည်။ တရားသူကြီးသည်များစွာသက်သေပြခဲ့သည် ... ထိုသက်သေသာဓကသည်တရားမဝင်သက်သေသာဓကဖြစ်ပြီးအဆိပ်အပင်သစ်များသီအိုရီနှင့်အညီ အသုံးပြု၍ မရပါ။ ချေးငွေဝန်ထမ်းများသည်အခြားတစ်ဖက်မှကိုက်ခြင်းခံရလျှင်ပင်အံ့အားသင့်ပါစေ။ ဒါတွေအားလုံးကသက်သေအထောက်အထားရဲ့စွမ်းအားအပေါ်အငြင်းပွားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေစွမ်းအား။ ပထမအဆင့်နှစ်ခုအပြီးတွင်သက်သေအထောက်အထားသည်ထိရောက်သောကိစ္စသာဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းအတွက်သက်သေအထောက်အထားအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ ယနေ့အရာခပ်သိမ်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်လျှင်ရုပ်ပုံများထက် ပို၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစွမ်းအားရှိနိုင်သည်။ ဤအဆင့်သည်တရားသူကြီး၏သက်သေခံချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာသက်သေအထောက်အထားစွမ်းရည်ကဲ့သို့ကြီးမားသည်မဟုတ်။
တရားမဝင်ရရှိသောအထောက်အထားများကို အသုံးပြု၍ မရပါ
အထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်တရားဝင်ဖြစ်ရမည်။ သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားနည်းနေပါက၎င်းကိုပယ်ဖျက်ရမည်လား၊ သက်သေအထောက်အထားအနေဖြင့်အရည်အချင်းမပြည့်မှီသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရမည်သို့မဟုတ်ချိန်ခွင်လျှာမျှတမှုကိုအကန့်အသတ်နှင့်လုံးဝဖယ်ကျဉ်ခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။
ခြွင်းချက်များဥပဒေအရပြprovides္ဌာန်းချက်များပါ ၀ င်ပါကအကြွင်းမဲ့ဖယ်ထုတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်မှာပြthe္ဌာန်းချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိသောသက်သေအထောက်အထားများအားပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ 156၊ အထောက်အထားမရှိပါ
သီးသန့်လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ရိုက်ကူးခြင်းဖြေ - ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမလိုက်နာသောပုဂ္ဂလိက ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ပုဒ်မ 158 ၏4ကိုတရားမ ၀ င်အထောက်အထားများကောက်ယူရန်အတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မီပါ။
Lynch အားဖြင့်ရရှိသောဝန်ခံဖြေ - တရားမ ၀ င်တရား ၀ င်သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်း မှလွဲ၍ တရားခံ၏ ၀ န်ခံချက်သည်တရား ၀ င်မဟုတ်သော၊ သူ၌သက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။
ပြည်နယ်တရားမဝင်စောင့်ကြည့်- နိယာမအားဖြင့်အမျိုးသားစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးတွင်ဆက်သွယ်ရေးကြီးကြပ်ရေးအစီရင်ခံစာရှိရမည်။ အကယ်၍ စောင့်ကြည့်မှုသည်တရားမ ၀ င်ပါက၊
တရားစွဲဆိုမှုအထောက်အထားများကောက်ယူခြင်း ၀ န်ဆောင်ခများ - သတ်မှတ်ထားသည့်အခြေအနေကိုနားလည်ပြီးသည့်နောက်၊
တရားသက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်း အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် အခြေအနေပေါ်မူတည်တယ် အဆိုပါတရားသက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းနှင့်အသေးစိတ်ကိုးကားမှု၏အခွအေနပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အမှုကိစ္စ၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်အခက်အခဲပေါ်မူတည်ပြီးတရား ၀ င်သက်သေအထောက်အထားများကောက်ယူသည့် ၀ န်ဆောင်မှု၏စျေးနှုန်းမှာကွဲပြားနိုင်သည်။
၀ န်ထမ်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်များအပြင်တရားစွဲဆိုမှုဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်းတွင်ယာဉ်နှင့်မြင်းခများ (ရေနံ၊ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ခ၊ အဝေးပြေးလမ်းခ၊ နေရာ ၀ င်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခနှင့်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာကုန်ကျစရိတ်) တို့ပါ ၀ င်သည်။
အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းသေချာပေါက်, အကောင်းဆုံးမဟုတ်, ခရက်ဒစ်ဗျူရိုလိမ်လည်မှုကိုသတိပြုပါ!
တရားအထောက်အထားများကိုစုဆောင်းခြင်းအပြင်၊ စုစည်း၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အရေးကြီးသည်။
သက်သေအထောက်အထားများကိုမကြာခဏဖျက်ပစ်, အတု, ဖုံးကွယ်, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုရန်ခက်ခဲသည်! ထို့ကြောင့်တရားရေးဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
"ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသက်သေအထောက်အထား", "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထား" နှင့် "အခြားသက်သေအထောက်အထားများ" ၏အရေးပါမှုကိုဆွေးနွေးပါ!